true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 8 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
I-Scientology kuphela engasingatha ngokuphelele imiphumela yezidakamizwa kumuntu.
Indlela yokukhipha umuntu kwizidakamizwa isiyaziwa manje futhi isetshenziswa ngempumelelo emhlabeni wonke.
Kuqala ngokusingatha ukudla okunomsoco kanye ne-Objective Processes okusiza umuntu esikhathini sokoma ngempumelelo.
Isenzo esilandelayo Uhlelo lwe-Purification. Lolu hlelo lwenzelwe noma ngubani umuntu othathe izidakamizwa noma oke wathinteka ezintweni ezinobuthi. Kususa umuntu kwimphumela e-restimulative yalezi zinto ngokuwasusa emzimbeni.
I-processing kwi-Drug Rundown ngemuva kwalokho yenziwa ukuqeda ukusingatha izithombe zengqondo ekusebenziseni izidakamizwa. Lokhu kuqeda imiphumela eyingozi engokwengqondo nengokomoya yezidakamizwa kumuntu.
Ngaphandle kwezindlela ezisebenzayo zokubhekana nemiphumela yezidakamizwa, abantu abaningi bebengeke bakwazi ukuhlukana nokuncika kwizidakamizwa.
Ezinye izindlela ze-rehabilitation yezidakamizwa zehlulekile ikakhulukazi ngenxa yokuswela ulwazi. Abazisebenzisayo abanakho ukuqonda kwangempela kwengqondo, noma isimo sokomoya somuntu. Imiphumela yezidakamizwa engqondweni nasemoyeni ayaziwa kubona. Izindlela zabo zincike emcabangweni wokusebenza kwengqondo wokuthi “umuntu uyisilwane” nokuthi ingqondo yakhe isebenza ngendlela efana nengqondo yesilwane. Izindlela ezinjalo azinaki amaqiniso abalulekile nayisisekelo mayelana nengqondo nomoya womuntu. Futhi azisebenzi, njengoba kuboniswa yizinga labo eliphakeme lokwehluleka.
I-Scientology inohlelo olusebenzayo noluphumelelayo lwe-rehabilitation yezidakamizwa ngoba alusebenzi kuphela ezinkingeni ezifanele, kepha imithombo yangempela yalezo zinkinga.
Ngokuqonda ngesimo sangempela somuntu, izindlela zokusingatha izinkinga ze-biochemical, zengqondo nezokomoya ezibangelwa yizidakamizwa zikhona.